Human Rights Watch oo Warqad canaan ah u dirtay Dowladda Imaaraadka | Baydhabo Online
Human Rights Watch oo Warqad canaan ah u dirtay Dowladda Imaaraadka
Sida maanta lagu qoray bogga hay’adda u dooda xaquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxaa lagu sheegay in hay’addu ay waraaq u dirtay madaxda dawlada isku taga Imaaraatka Carabta taasoo ay ku weydiisanayso in dawladaasi cadayso dadkii Soomaalida ahaa ee lagu duqeeyay ayagoo doon saaran ka baxaya dalka Yemen bishii hore.
Agaasimaha hay’adda Human Rights Watch ee gobolka Bariga dhexe Sarah Leah Whitson ayaa sheegtay in sababta ay ula xiriireen dawlada Imaaraatka ay tahay kadib markii dawlada dalkaas oo qeyb ka ah dalal ay ciidamadoodu ka shaqaynayaan dalka Yemen oo haddana ka hadlin dhacdadii lagu xasuuqay Soomaali naftooda kala cararayay dalka Yemen oo doon ay la socdeen gantaalo lala dhacay 16 bishii naga dhamaatay ee March.
Sarah Leah waxaa ay warqadooda oo ay direen R/wasaaraha Imaaraatka Carabta Sh, Max’ed Bin Rashiid Al-Makhtuum ayaa waxaa ay ku sheegeen inay ku weydiisteen dawlada Imaaraatka inay cadayso doorkii ciidamadeedu ku lahaayeen dhacdadaas Soomaalida lagu laayay.
“Soomaali naftooda lala caraysa in la bartilmaamaysto waa wax aan sharci aheyn dawlada Imaaraatkana jawaab ayaan ka rabnaa” ayay tiri Sarah Leah Whitson oo hay’adda Human Rights Watch u qaabilsan Bariga dhexe.
Waxyaabaha shakiga galiyay haweeneydaan ayay haweeneydaan sheegtay in weerarkaasi ay ka qeyb qaadatay diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah taasoo ay haysan kooxda Xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalaysa.
Wax yar kadib markii uu soo baxay warka hay’addaan warbaahinta dawlada Imaaraatka ayaa qortay in saraakiisha ciidamada ee ku sugan Yemen ay dhacdadaas u arkaa masiibo bini’aadanimo isla markaana ay soo dhawaynayaan baaritaan kasta oo dhacdadaas lagu sameynayo.